यो असार महिनामा कुन दिन कुन भगवानको व्रत बस्दा लाभकारी हुन्छ ? – live 60media
यो असार महिनामा कुन दिन कुन भगवानको व्रत बस्दा लाभकारी हुन्छ ?
यस महिनालाई सन्धिकालको महिना भनिन्छ ।यो महिना वर्षा ऋतुको शुरुवात हुने गर्दछ । हिन्दु पचांग अनुसारको तेश्रो महिना असार स्वास्थ्यका हिसाबले सहि महिना मानिदैन । यहि महिनामा रोगको सं क्रमण सर्वाधिक हुने गर्दछ । यस महीनाबाट वातावरण केहि परिवर्तन देखिन्छ । गर्मीका फल तयार हुने महिना पनि यहि हो ।
असार महिनामा सुर्यसहित भगवान बिष्णु र देवीको उपासना पनि गरिन्छ । यहि महिनामा देवशयनी एकादशी परेकाले त्यस दिन भगवान विष्णु शयनमा जाने मान्यता छ । जसका कारण यो तिथि पश्चात आउँदो ४ महिनासम्म कुनै पनि धार्मिक काम गर्न बर्जित गरिएको छ । जान्नुहोस् असारको कुन तिथिमा के पर्व छ ।
असार १ – आषाढ/मिथुन संक्रान्ती,असार ३ – योगिनी एकादशीव्रत, असार कृष्ण एकादशी,असार ४ –प्रदो.ष व्रत,असार ५ –दिल्लाचह्रे पूजा,असार ६ – शिव चतुर्दशी व्रत,असार ७ – असार कृष्ण औसीं, खण्डग्रास सुर्यग्रहण,असार ९ –भगवान जगन्नाथको रथयात्रा, त्रिपुष्कर
असार ११ – विनायक चतुर्थी व्रत, भूमिपूजा,असार १२ – स्कन्ध षष्ठी, साई टेऊराम जयन्ती,असार १३ – वैवस्वत मनु पुजन दिवस, देउपाटनमा गंगामाई रथयात्रा, सूर्यपूजा, त्रिपुष्कर,असार १४ – मासिक दुर्गाष्टमी, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा,असार १५ – दहिचिउरा खाने दिन,असार १७ – हरिशयनी एकादशी, तुलसी रोप्ने,चर्तुमास व्रत सुरु
असार १८ – प्रदोष व्रत,,असार २० – पुर्णिमा व्रत, असार २१ – गुरु पुर्णिमा, ब्यास जयन्ती, गुरु पूजा दक्षिणामुर्ती पूजा,असार २६ – वितककथा प्रारम्भ,असार २८ – रबि सप्तमी, अष्टमी व्रत,असार २९ – गोरखकाली पूजा, भानुजयन्ती
← वास्तु शास्त्रका अनुशार घरमा ७ ओटा घोडाको तस्विर राख्दा फाइदै फाइदा
यि हुन् मुटु शरीर बाहिर भएकी ५ वर्षकी बालिका →